Wardere: Magacaabista wasiirka jaaliyadaha dibadda waa talaabo haboon
Waa wax lagu farxo in madaxweynaha cusub ee Sh. Shariif iyo wasiirka koowaad Cumar Abdirashiid ay muujiyeen muhimadda ay leeyihiin jaaliyadaha dibadda ku nool ee Soomaaliyeed iyo doorka ay cayaari karaanba iyo inay wasiir dhan u magacaabeen arrinkaas ama wakiilashada ay u wakiisheen inuu ku soo xiro qurbo joogta Soomaaliyeed. Dawlado badan ayaa yaqaan sida loo maalo ama loo isticmaalo jaaliyadahooda- dawladahaas waxaa ka mid ah. Iiraan, Israel, Ireland, Italy, Ethiopia., India.iwm.
Jagada wasiirka qurbo joogta Soomaaliyeed waxay dhalisay buuq iyo suaalo badan oo ka mid ahaayeen maxay wasaaraddu qaban doontaa? Sow hawsha kuma filna wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan iskaashiga caalamiga ah?. Xataa waxaa jagada saluugay beesha wasiirka. Haddaba mala dhihi karaa Prime Minster Cumar Abdirashiid waxaa haboonayd inuu sharxo sababta uu u magacaabay wasiirka qurbo joogta?. Waxaad moodaa in dad badani weli maskaxdoodu wax ku cabirto waagii ay Soomaaliya arrimaha dibadda u qaabilsanaayeen Abdiraxmaan Jaamac Barre iyo Cumar Carte Qaalib ama wasaaraddii arrimaha dibadda keliya.
Adduunkaas waa rogmay, maanta waxaan ogsoonahay in Soomaali aad u fara badan dibadda u qaxeen weliba ayagoon iqyaarkooda la weydiin la qixiyey. Waxaa kale oo aan ogsoonahay in dadkaasi sida kuwa gudaha joogaa adeeg u baahan yihiin iyo talooyin iyo ururin oo xataa Soomaalinimadooda la ilaaliyo. Dhibaatada Soomaalida dibadda ku nool haysata hadday ahaan lahayd mid maxkaxeed ama mid nafeed waa laga dheregsan yahay. Kuwa jooga SA, USA , Africa, Europe , Australia iyo Asia intaba waa u baahan yihiin cod iyo adeeg iyo isku xir.
Waxaa kale oo aan ogsoonahay in ay dawladda aan xoogaysanin weli ay wax tari karaan iyo dadkoodaba hadday ahaan lahayd dhaqaale ama siyaasad laakiin waa haddii uu wasiirka qurbo jooga ururiyo oo isku dayo inuu mideeyo lana yimaado qorshe macquul ah. Soomaali badan oo qurbaha ku mool ayaa wax walba u huraya inay maruun arkaan dadkooda oo dawlad fiican iyo adeeg hela iyo nabad. Xataa waxay diyaar u yihiin inay dawladooda iyo dadkooda ugu deeqaan $50 ama $100 iyo ka badanba haddii la qaado olole balaaran. Soomaalidaasi waxay ogyihiin in dhaqaalaha la siiyo dawladda aan weli hirgelin ee Soomaaliya oo ay bixiyaan dawladaha shisheeye ama hayadaha NGOs ay ku xirayaan shuruudo adag. Deeqdaa Soomaalida qurbaha oo haddii la isu geeyo noqon karta lacag xooggan waxay dawladda Soomaaliyeed fursad u siin lahayd inay danaheeda wax ka fuliso si xor ah.
Wasiirka Qurbo jooga ninka loo magacaabay oo ah mudane Abdulaahi Ahmed Abdulle (Azhari) waxaa uu ka mid ahaa duuliyeyaashii sare ee Soomaali Airlines. Waa nin aqoon u leh jagada loo magaacay laakiin guushiisa waxay ku xirnaan doontaa hadba sida ay ula shaqeeyaan Madaxweynaha iyo Prime Ministerka iyo siday uga dhaadhiciyaan bulshada Soomaaliyeed oo ku kala firirsan caalamka ayagoo isticmaalaya qalabka warbaahinta.
Waxaa kale oo ay ku xirnaan doontaa wasiirada iskaashiga caalamiga iyo arrimaha dibadda iyo safaaradaheeda. Waxaa kale oo ay ku xirnaan doontaa Soomaalida qurbaha ku nool sida ay uga faaiideystaan wasiirka qurbo jooga. Ugu danbayntii waxaa ay ku xirnaan doontaa wasiirka naftigiisa sida uu jaaliyadaha loo soo magacaabay ula shaqeeyo ama u halwgeliyo.